के–के भयो सर्वदलीय बैठकमा ? कसले के भने ? – ejhajhalko.com
के–के भयो सर्वदलीय बैठकमा ? कसले के भने ?
२१ पुष २०७४, शुक्रबार ०२:३० 181 पटक हेरिएको
काठमाडौं । बिहिबार बालुवाटारमा पाँच दलको सर्वदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रमुख र राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारलाई प्रस्ट सुझाब नदिएपछि यो प्रक्रिया फेरि केही दिन लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध नबन्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिएका थिए । बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा र संघीय समाजवादीका शीर्ष नेता सहभागी थिए ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्
अध्यादेश जारी भएपछि पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । सरकारले छिटो निर्वाचनको मिति तय गरोस् भन्ने चाहेका छौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक नगर्न आयोगलाई दबाब दिएर सरकारले विलम्ब गराउन खोजेको छ । यस्तो नगरोस् भनेर सचेत गराएका छौँ । प्रदेश प्रमुख र राजधानीका विषयमा सरकारले के सोचेको छ रु हामीलाई थाहा छैन । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।